Lernen Sie Englisch in Amerika (Informationen über WESLI in Burmese) | WESLI Lernen Sie Englisch in Amerika (Informationen über WESLI in Burmese) – WESLI
Lernen Sie Englisch in Amerika (Informationen über WESLI in Burmese)
Schulprofil ကျောင်း သ မိုင်း အကျ ဉ်း
WESLI (Wisconsin Englisch als Fremdsprache Institut) ကို Wisconsin ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Madison တွင် ၁၉၈၁ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသော ကျောင်းသားများ၊ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်လိုသူများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများအတွက် WESLI တွင် Level ၈ခုခွဲကာ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင်း0င်ြ ဖစ် သ ည့်CEA မှ တရား0င်အသိအ မှတ်ြ ပု ထား သော ကျောင်း တစ် ကျောင်းြ ဖစ် ကာြ ပည် နယ် ဥပေ ဒနှင့်အ ညီ အေ မ ရိ ကန် တွင် ကျောင်း တက် လိုေ သာ ကျောင်း သား များကို သာ0င်ခွ င့်ြ ပုေ သာ ကျောင်းြ ဖစ် သည်. အေ သး စိတ် သိ ရှိ လိုပါက WESLI ၏0က်ဘ်ဆိုက် လိပ် စာ www.wesli.com0zugegriffen werden kann.
Sicherheitsmonitore, wünschenswert, Schönheit und Vergnügen
KLASSEN & ZEITPLAN: Klasse und Spielplan
Englisch WESLI Lage Grundstufe Berufsschulen0Level 8 Split-Level unterrichtet. (WESLI Lehrplan auf Seite6der Probe,0auf der Website "Liste der diesjährigen Hochschulstudienjahr(aktuelle Sitzung Kursliste)"Sie können entweder anzuzeigen.) အတန်းတစ်တန်းလျှင် ပျှမ်းမျှ ကျောင်းသား၉ဦးသာ လက်ခံလေ့ရှိပြီး WESLI တွင်တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။တက်ရမည့် စာသင်ကာလ တစ်ခုလျှင် နှစ်လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်ချိန် တစ်ပတ်လျှင် ၁၈နာရီမှ ၂၂နာရီ၊ အိမ်စာအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၀နာရီမှ ၁၅နာရီခန့် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကာလတစ်ခုပြီးလျှင် ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် မိမိ တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းကာလ အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရမည့်အချိန်နှင့် ပညာသင်စားရိတ်ကို ကျောင်းလျှောက်လွှာ (သို 4)0können auf der Website eingesehen werden.
LEHRER & PERSONAL: Lehrer / Erzieher und0Mitarbeiter
Englisch Fachunterricht durch Schritt 8
(Row2Stunden pro Woche in einer Zeit, es wird2Tage3Tage dauern.)
ÜBERSEEISCHE bedingte Zulassung (VATER):ြ ပည် ပကျောင်း သားြ ခွင်း ချ က်0 င်ခွ င့်(O)
OCA Wann sollte ich ?
ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိသော်လည်း WELSI သို့လာရောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့် ကျောင်းသားဗီဇာရရန် အလွန်ခက်ခဲ့သော နိုင်ငံများမှ ကျောင်းသားများ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိထားသော တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ကောလိပ်မှ ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့်စာတစ်စောင်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး WESLI မှ ထိုအချက်ကို ကျောင်းသား၏ I-20(ကျောင်း0င်ခွ င့်ဖိတ်ြ ကား လွှာ) ပေါ် တွင် ဖော်ြ ပေ ပး မည်ြ ဖစ် သည်.
Wie erhalte ich OCA Can
OCA umfassende Daten anzuwenden(Bildung, Das Geld ist) Welsi Studenten in der Lage, Unterstützung von von einem Berater zu suchen.
Flüssigkeiten gelten angemessen untersuchen, wie die amerikanischen Universitäten
အြ ခား အခမဲ့0န်ဆောင် မှုများ – Messen, Übersprechen, ...
WESLI Aktivitäten Koordinator wollen, dass die Sprachaustausch zu lernen, wird an die Universität angeschlossen werden.
Zwei Wochen vor seiner Zeit auf Reisen und andere Informationen senden Madison Flughafen im Voraus bezahlt werden bleiben, oder wenn Sie mit den Einheimischen und Familien leben gesendet werden.
MEHR : WESLI မှ ၀န်ထမ်းများက immigration အတွက် အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း ၊ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း၊ ဆရာဝန်ရှာပေးခြင်း နှင့် အခြားပြဿနာများကို ကူညီပေးရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
Gehäuse - Komfortable & Erschwingliche Komfort und weniger Kosten Gehäuse
WESLI Wohnheim oder Gastfamilie (ဒေ သ ခံ အိမ် တွင် နေ ထိုင်ြ ခင်း) Empfangen US Familie zu Hause WESLI Housing Coordinator (Housing Management Officer) Arrangements werden eingeführt werden. In gemeinsamen Gehäuse (Die Schüler in der kollektiven Haus leben) အခြေအနေမျိုးတွင် အိမ်ယာစီမံရေးမှူးသည် နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသားများ အတူတကွနေထိုင်နိုင်ရန် အတတ်နိုင်ဆုံးစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နေထိုင်စဉ်အတွင်းတွင်လည်း လိုအပ်သမျှကို ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆောင်နေခြင်း သို့မဟုတ် homestay (ဒေ သ ခံ အိမ် တွင် နေ ထိုင်ြ ခင်း) နေခြင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်မှာ တူညီသလောက်ရှိပြီး မိမိရွေးချယ်သောနေရာတွင် ၂လအနည်းဆုံးနေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းလျှောက်လွှာရှိ ကုန်ကျစားရိတ်ဇယားတွင် လက်ရှိဈေးနှုန်းများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
GASTFAMILIE mit einer amerikanischen Familie: အေ မ ရိ ကန် မိသားစု0င်များနှ င့်အ တူေ န ထိုင်ြ ခင်း
SCHÜLER (F-1) VISA: ကျောင်း သား ဗီဇာ (F-1):
*F-1 ကျောင်း သား ဗီ ဇာေ လျှာက် ထား မ ည့် သူများ သည် အောက် ဖော်ြ ပ ပါ စာ ရွက် စာ တမ်3းမျိုး လုံး ကို ကျောင်း0င်ခွ င့်လက် ခံ သ ည့်စာ ရွက် စာ တမ်း များ မ ထုတ် ပေး မီ ပေး ပို4ပေး ရ မည်.
1. သင် တန်း0င်ခွ င့်လျှောက် လွှာ
သင် တန်း0င်ခွ င့်လျှောက် လွှာကို WESLI ၏0က်ဆိုက် (www.wesli.com)Senden Zusatz.
Gemeinsame Ausbildung E-Mail-Anwendung (သို4မ ဟုတ်) ဖက် စ်ြ ဖ င့်လည်း ပေး ပို4နိုင် ပါ သည်.
2. လျှောက် လွှာေြ ကး
လျှောက် လွှာေြ ကး ဒေါ် လာ 100 ကို Kreditkarte (Siehe သို4မ ဟုတ် Meister ကဒ်) (သို4မ ဟုတ်) ငွေ လွှဲ(သို4မ ဟုတ်) Öffnen Sie ein Bankkonto in den USA seine Schecks schicken.
3. ငွေေြ ကး ဆိုင် ရာ စာ ရွက် စာ တမ်း
Finanzielle Dokumente per Fax(သို4မ ဟုတ်) အီး မေး လ်ြ ဖ င့်ပေး ပို4နိုင် ပါ သည်.
Das Leben in der Schule während der Schulpausen und für Lebensmittel verwendet werden, einen Nachweis über ausreichende finanzielle Leistungsfähigkeit zu zeigen, aus den folgenden Unterlagen übermittelt werden müssen.
. Eine Kopie der persönlichen Bankkonten des Antragstellers
B. Die Klägerin Eltern (သို4မ ဟုတ်) Kopien der Schule sein Konto zu unterstützen (Unterstützung während in den Vereinigten Staaten zu studieren müssen0genehmigt werden.)
C. Regierung (သို4မ ဟုတ်) Kosten Organisation, während für ein schriftliches Dokument zu studieren.
I-20 durch UPS ရယူလိုပါက auf Antrag aufgeführten Schulen müssen eine Poststelle geben.
အ ထက် ပါ အချ က်3 ချ က်လုံး ကိုြ ပ ည့်စုံ စွာ ရ ရှိြ ပီး သည်နှင့်I-20နှ င့်ကျောင်း0င်ခွ င့်ဖိတ်ြ ကား လွှာကို ရုံး ဖွ င့်ရက်2ရက် အ တွင်း ပေး ပို4ပေး မည်ြ ဖစ် သည်.